Informations | DEPARTMENT OF MARINE ADMINISTRATION | Page 3
April 7, 2017 DMA-MM
ကြေညာချက် (၁ ̸ ၂၀၁၇)
CoC နှင့် CoP All-in-One စာအုပ်များအား လက်ရှိတွင် (၁) ပတ်ချိန်းဆို ထုတ်ပေးခဲ့သော်လည်း နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များ အတွင်း ကြန့်ကြာမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အောက်ပါရက်များအတိုင်း ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
Informations, Shipper for VGM
Shipper for VGM
23/05/2017 VGM List LISTS OF REGISTERED SHIPPERS FOR VERIFIED GROSS MASS (VGM) AT DMA APPROVED SHIPPERS ( SRN01 0001 TO SRN01 1227)
24/06/2016 ကြေငြာချက် (၃/၂၀၁၆) Container ဖြင့် ကုန်ပစ္စ္စည်းတင်ပို့သည့် Shipper များ Verified Gross Mass (VGM) ကြေငြာနိုင်ရေးကိစ္စ္စ
15/06/2016 ကြေငြာချက် (၂/၂၀၁၆) Verified Gross Mass (VGM) ကြေငြာနိုင်ရေးအတွက် Weighing Equipment စစ်ဆေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများအား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စ္စ
15/07/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Results for Deck Officer Class III (2/2019) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL (2-2019) PASSED
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
( Reg. III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MMU EXAM (BOE) RESULT 1-20189
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Supplementary Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency
(Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 1-2019 –
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of
Competency ( Regulation III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III Supplementry ORAL Result
26/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I & II Supplementary Oral RESULT 1-2019
03/06/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
(Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 1-2019
21/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency
(Reg: III/3) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V Oral Exam RESULT 1-2019
21/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency
(Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I & II Oral RESULT 1-2019
14/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (2/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (2-2019) ORAL
08/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 1-2019-
08/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for MEO Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III_Written result_1-2019
06/05/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class III (Reg:II/2) (1/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (1-2019) BOE
29/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Master (F.G) (2/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL (2-2019)
24/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for MEO Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I &II Written Result 1.2019
11/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency
(Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ 4.ETO BOE Written Result
02/04/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Oral Examination Result for Deck Officer Class III (1/2019) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (BOE) (1-2019)
29/03/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Written (BOE 1/2019) Examination Results of Deck Officer Class II (Reg.II/2) Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CM (FG,NCV) (BOE) 1-2019 RESULT
28/02/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of
Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I & II Oral RESULT 3-2018 (Supplementary)
28/02/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Supplementary Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of
Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III, SUPPLEMENTARY ORAL Result
28/02/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Supplementary Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency
(Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Supplementary Result 3-2018 –
31/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer oral result 3-2018
31/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Results of Oral Examination for CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (1/2019)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate (F.G) & (NCV) (1/2019)
25/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class III (Reg:II/1)(3/2018)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ O.O.W BOE (3-18) result
24/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Result of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency (Reg: III/3) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class IV&V exam result 3-2018
24/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I&II oral result 3-2018
18/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနမှ Results of Oral Examination for Master (F.G)(1/2019)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ master (0ral)(1-2019)
09/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO oral result 3-2018 –
03/01/2019 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg. III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII_Written result_3-2018
19/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I &II Written Result 3.2018
19/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result – 3-2018
14/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class III (3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW(ORAL)(3-2018)
06/12/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class II (Reg.II/2), Chief Mate (F.G) and Chief Mate (NCV) (BOE 3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ chief mate (BOE) (3-2018)
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency
(Reg.III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I &II Oral RESULT 2-2018
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
(Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 2-2018 (B)
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Result of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competency
(Reg: III/3) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V Exam RESULT 2-2018 (8-11-18)
08/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 2-2018 -(1)
01/11/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (3-18)
08/10/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Master (F.G) (3/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER (F.G)(RESULT) (3-2018)
03/10/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
(Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 2-2018
28/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class III (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL (2-2018) RESULT
17/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class III (Reg:II/1) (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Written Examination for Deck Officer Class III
11/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency
11/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Result of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competencyများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V Exam RESULT 2-2018
05/09/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency
( Reg. III/1 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII_Written result_2-2018
23/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 2-2018 –
20/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Deck Officer Class II (Reg:II/2) Chief Mate (F.G) and Chief Mate (N.C.V) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHEFT MATE (F.G) (NCV)(2-18)
15/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg. III/2 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I&II, Written Result 2/2018
03/08/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result – 2-2018
18/07/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း ဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHEFT MATE ORAL RESULT (2-2018)
29/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း ဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for MASTER (F.G) (2/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL (2-18)
18/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 1-2018
13/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Completed Examination Result for OOW (F.G) (1/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (ORAL) (1-18)
08/06/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Deck Officer Class III ( 1/2018 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL RESULT(1-18) updated
25/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2)
များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class-I DMA Oral RESULT
22/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Written Examination for Deck Officer Class III ( Reg:II/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (BOE) Result (1-18)
18/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII_Written result_1-2018
09/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result 1-2018 –
07/05/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for DECK OFFICER CLASS II ( Reg:II/2 ) Chief Mate ( F.G ) & Chief Mate ( NCV ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (BOE) FG & NCV RESULT(1-18)
30/04/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I&IIWritten Result 1.2018
20/04/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result
30/03/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Chief Mate (F.G) & Chief Mate (NCV) (1/2018)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE ORAL RESULT (1-18)
16/03/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result 3-2017
21/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Oral Examination Result for Marine Engineer Officer Class IV&V Certificate of Competencyများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V _ Oral Exam RESULT
20/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Oral Examination for MASTER (F.G) ( 1/2018) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL RESULT (1-18)
19/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS I&II Oral RESULT- 16.2.2018 II
15/02/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Competency ( Reg. III/1 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Class III Written result 3/2017
24/01/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Written Examination for Deck Officer Class III ( Reg: II/1 ) ( 3/2017 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW (BOE) Result (3-17)
22/01/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Oral Examination for Deck Officer Class III (3/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL RESULT(3-17)
19/01/2018 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO CLASS I & II BoE Written Result
20/12/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Oral Examination for Electro-Technical Officer Certificate of Competency (Reg.III/6)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO ORAL Result
19/12/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Results of Written examination for Deck Officer Class II (Reg:II/2) Chief Mate (F.G) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (BOE) RESULT(3-17) 001
17/11/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written examination for Electro-Technical Officer များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ ETO BOE Written Result
15/11/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Oral examination for Marine Engineer Officer Class III များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO C III oral result
Results of Oral examination for Marine Engineer Officer Class IV & V များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CLASS IV&V _Exam RESULT
10/11/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
Results of Oral examination for CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (2/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER & CHIEF MATE (F.G) (NCV) COMPLETED 123
24/10/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Oral examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg.III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO class I & II oral result of22017
13/10/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
(2/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MASTER ORAL RESULT (2-17)
03/10/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ
Results of Written examination for Third Engineer Officer Certificate of Competency (Reg.III/1)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CIII Written Result 2-2017
21/09/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှResults of Written examination for DECK OFFICER CLASS III ( Reg:II/1) OOW (F.G)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Written Result DECK OFFICER CLASS III (F.G)
11/09/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှResults of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency (Reg. III/2)များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO C I & II BOE written result
30/08/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှOral Examination Results for DECK OFFICER CLASS III ( Reg:III/2 ) (2/2017) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ OOW ORAL RESULT(2-17)
18/08/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for DECK OFFICER CLASS II ( Reg:II/2 ) Chief Mate ( F.G ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate(BOE) written result 02A 210817
18/08/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ EXAMINATION RESULTS FOR CHIEF MATE (F.G) BOE(2A/2017)
COMMENCING ON 24-07-17 များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE (BOE)2-2017A Passed list
12/07/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency (Reg.III/1) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Third engineer ORAL Result
28/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for DECK OFFICER CLASS II ( Reg:II/2 ) Chief Mate ( F.G ) များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate(F.G) (BOE) written result
28/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ
COMMENCING ON 05-06-17 များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Chief Mate (F.G) (BOE) 2/2017
20/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class IV & V Certificate of Competency ( Reg. III/3 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class IV & V oral result
09/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Oral Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ MEO Class I & II Combined March 2017 Oral result
01/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for CHIEF MATE (F.G) & CHIEF MATE (NCV) (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ CHIEF MATE ORAL RESULT _1-17_ FINAL
01/06/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class III Certificate of Competency ( Reg. III/1 )
19/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Oral Examination Result for MASTER (F.G) (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Oral Examination Result for MASTER (F.G) (1/2017)
15/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Written Examination Results for O.O.W BOE (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Written Examination Results for O.O.W BOE (1/2017)
15/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းဌာနခွဲမှ Examination Results for O.O.W BOE (1/2017) ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Examination Results for O.O.W BOE (1/2017)
15/05/2017 ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊ Results of Written Examination for Marine Engineer Officer Class I & II Certificate of Competency ( Reg. III/2 )
Continue reading Notice →
Visit Us Select Category About DMA Functions History Organization Policies Active Number of Officers and Ratings Buoy Certificates Certificate of Endorsement (COE) Application Procedure CoC Application Procedure CoP Application Procedure (တတ်ကျွမ်းမှုလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း) CERTIFICATES OF RECOGNITION Circulars Contact Us Daily Weather Forecast Directives Engine Coastal/Inland Foreign Going Exam Result Firing Exercises Flag State Inland Vessel Seagoing Golden Dowa Eco-System Myanmar Co., Ltd. Guidance Home Hydrographic Informations Daily Weather Forecast Events ISPS Compliance Ports Laws Instruction Legislation Laws Policy List of Service Provider for Port Reception Facility Marine Engineering Division Marine Environment Pollution Report Made Island Operation Centre Maritime Rescue Coordination Centre National Contact Point MECH COOL Engineering Co., Ltd. Myanmar Maritime Police Force Myanmar Port Authority (MPA) News Notice Notice to Mariner New Obstructions Notifications Offshore Exploration Port State Control Pre-Requisites for Registration of Ships Bareboat Charter Registration of Ships Recognized Organizations Registered Shippers for VGM SAFETY & SECURITY Maritime Security Pre-Arrival Notification SAR CONTACT Seafarers SIRB/ CDC Statistics Shipper for VGM Uncategorized Uniteam Training (UT) Weather Forecast Yangon City Development Committee (YCDC)